Semalt Inotsanangura Nzira Yokudzivirira Sei Mamwe Nyika Kubva Paunosvika Pasi Yenyu
Kana iwe uine webhusaiti kana bhulogi, unofanira kunge uchiziva nezvokuti inosvika kune dzimwe nyika kuburikidza nekusara. Nzvimbo dzakasiyana-siyana hadzina kukodzera kune vamwe mune dzimwe nyika, saka hatifaniri kutarisira kufamba kukuru uye kushanyirwa kubva kwavari. Nemuenzaniso, kana iwe uine bookshop yekumba uye misika yako ndeyevanhu vomunyika yako, saka iwe haufaniri kutendera dzimwe nyika kuparadza bhenjiro re server yako.
Kune zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti kudzivirira kuwana kune dzimwe nyika kunokosha. Chikonzero chakanaka ndechokuti nzvimbo yako inobata chete kuvanhu veko uye haina chokuita nevanze kunze, saka unogona kumisa Google, Bing, uye Yahoo kubva kunyoresa nzvimbo yako kune iyo nyika - cheap dedicated servers unmetered. Pano, Ross Barber, the Semalt Mutevedzeri weMutengi weVatengi, akakurukura nzira dzakawanda dzinodzivirira nyika:
1. The .htaccess file
Kana uri webmaster, unogona kuziva kuti kuchinja .htaccess file inogona kubatsira nzvimbo yako nenzira dzakawanda. Izvo zvinotyisa zvinotyisa uye vese vanoshandisa ma proxies uye mapurasi kuitira kuti vaite mabasa avo. Zvisinei, webmaster, zvisinei, inogona kudzivisa kero dzePI dzisingafungi kuitira kuti vaseki varege kuita zvinhu zvisina kunaka paIndaneti. Yako .htaccess file inogona kukura kusvika kune zviuru zvemigwagwa yemagwaro kana iwe uchivhara nyika dzisina kudiwa. Nokuda kweizvi, iwe unongoda kuisa imwe code mukati me .htaccess file, uye code ndeyokuti:
Mutemo Wadza, Rega
Dzinga kubva ku 1.1.1.1
Chibva ku 2.2.2.2
Chibva ku 3.3.3.3
2. Shandisa kambani yekugadzirira nemasangano ekuvhara
Unogona kushandisa basa rekugadzirira rinopa maitiro edzikunyorera nyika dzakasiyana-siyana. GoDaddy ndiyo imwe chete yekambani inopa iyo inoita basa iri pamutengo wepamwedzi pamwedzi.
Benzi risina chinhu, iro rinonziwo VPS, ndiro mishonga yaungashandisa kudzivirira nyika dzisina kudiwa. Kubva pane software ye firewall kusvika kubasa rekugadzirisa uye paniriri yekudzora, sirivha isina chinhu inounza zvose mumaoko ako. Zvimwe zvitatu zvakakurumbira zvisingasviki zvaunogona kuenda naDoodOcean Droplet, Rackspace, uye InMotionHosting. Google mazita avo uye chengeta mashoko.
4. Shandisa CPanel IP blockers yako
Kambani inobatira iwe yaunoshandisa inogona kukubatsira kuti uvhare maIndaneti kuburikidza nejeri rekushandisa. Iwe unokwanisa kuvasangana navo zvakananga nekuvakumbira kuti vaise an IP blocker pane cPanel kuitira kuti iwe ugone kudzivisa IPs yenyika dzausingatsvaki kuwana magwagwa kubva.
5. Kugadziriswa kana kugadzirisa Geo
Geo Restriction inotibvumira kusarudza nyika dzatinoda kudzivirira kuwanikwa. Nokugadzirisa whitelist kana kuti blacklist yenyika idzodzo, unogona nyore nyore kudzora kuendeswa kwewebhu yako zvinyorwa kuburikidza neAma Amazon CloudFront. Akamai ndeimwe nzira yekuenda nayo. Kana iwe une CDN ichipa webhu yako yehutano, unofanirwa kuva nehanya nekushandiswa kusina maturo kwebhanwidth yako. Teerera kutarisira maGeoblocking uye kuti zvinhu zviitwe zvakakwana.
Kana iwe une ma Apule modules, haufaniri kuzadza faira .htaccess nemitambo yakawanda ye IPs. MaxMind anotipa mahwendefa ehurukuro atinogona kushandisa kuti tidzivise IPs dzisina kudiwa kana kuti dzinoshungurudza. Its GeoLite2 ndiyo nzira yakanakisisa yekuenda nayo uye haina mari.